अमेरिकी दूतावास काठमाडौंको जवाफ डिभी लोटरी भर्दैमा अमेरिकाको विद्यार्थी भिसाका लागि स्वत अयोग्य भइदैन । तर डिभी लोटरी भर्नुको अर्थ तपाई अमेरिकामा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न जान चाहनुहुन्छ भन्ने हो
मेरा श्रीमान् अमेरिकामा विद्यार्थी भिसामा हुनुहुन्छ । मैले उहाँको ग्रयाजुएसनमा सहभागी हुनका लागि डिपेन्डेन्टका रुपमा एफ टु भिसा आवेदन दिएकी थिएँ । तर मेरो भिसा अस्वीकृत भयो । किन ?
मैले युएससीआईएसमा एसाइलम आवेदन दिदैछु , के मलाई मेक्सिको पठाइन्छ ?
मैले युएससीआईएसमा एसाइलम आवेदन दिने योजना बनाएको छु । के मलाई एसाइलम आवेदनबारे निर्णय नहुँदासम्म मेक्सिको पठाइन्छ ? यदि तपाई युएससीआईएसमा एसाइलमका लागि आवेदन दिदै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई मेक्सिको पठाइदैन
अमेरिकामा युएससीआईएसमा आवेदन दिइएको एसाइलमको आवेदनको अवस्थापनि अनलाइनबाट हेर्न मिल्ने भएको छ । युएससीआईएसको वेवसाइटमा गएर रिसिप्ट नम्बर हालेर आफ्नो आवेदनको अवस्थाबारे बुझ्न सकिने भएको छ । अहिलेसम्म एसाइलमका केसको अवस्था
मैले डिभी लोटरी भर्दा वैवाहिक स्थीति अविवाहित भरेर अमेरिका आएँ । अब मैले मेरा श्रीमति र छोराछोरीलाई कसरी अमेरिका ल्याउने ? तपाईले यदि विवाहित हुँदाहुँदै पनि अविवाहित भनेर आवेदन दिनुभएको
अमेरिकी ड्राइभिङ लाइसेन्स हुनेले नेपालमा गाडी चलाउनु परेमा नेपालकै ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनुपर्छ । तर त्यसका लागि लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाहरू दिनुपर्दैन । नेपाली कानुन अनुसार नेपालभित्र सवारी साधन चलाउन अमेरिका
एसाइलम स्वीकृत भएको कतिसमय पछि मैले ग्रिनकार्ड पाउनसक्छु ? तपाईको एसाइलम स्वीकृत भएको मितिले एकबर्षपछि तपाईले ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिनसक्नुहुनेछ । तर तपाई भौतिकरुपमा अमेरिकामा एकबर्ष बसेको हुनुपर्छ । यो
टीपीएसमा रहेको मैले ग्रिनकार्डवाहकसँग विवाह गरेर ग्रिनकार्ड पाउन सक्छु ?
मेरो टीपीएसको स्टाटस छ । के मैले अमेरिकी ग्रिनकार्डवालासँग विवाह गरेर ग्रिनकार्ड पाउन सक्छु ? ग्रिनकार्डवालासँग विवाह गरेर तत्कालै ग्रिनकार्ड पाउने सम्भावना हुँदैन । किनभने ग्रिनकार्डको दम्पत्तिका लागि भिसा करेन्ट
मैले अमेरिकाको एउटा राज्यबाट वर्क परमिट लिएर अर्को राज्यमा काम गर्दैछु । बैंक एकाउन्ट पनि खोलेको छु । केही समस्या होला कि नहोला ? एउटा राज्यमा वर्क परमिट लिएर अर्को